Bit By Bit - Ukuqwalasela ukuziphatha - 2.4.3 imifuniselo Approximating
Sinako ezaku imifuniselo ukuba asikwazi ukwenza. Iindlela ezimbini ukuba ingakumbi kuxhamla kwiminyaka zedijithali ezithelekisekayo imifuniselo zendalo.
imibuzo emininzi ebalulekileyo yenzululwazi kunye nomgaqo woko. Makhe siqwalasele, umzekelo, umbuzo ilandelayo: yintoni isiphumo inkqubo yoqeqesho umsebenzi umvuzo? Enye indlela yokuphendula lo mbuzo kuya kuba kwelinge alawulwayo apho abasebenzi baye ngokungenamkhethe mhlawumbi kufumana uqeqesho okanye kufumana uqeqesho. Emva koko, abaphandi bakwazi ukuqikelela ifuthe loqeqesho ezi nxaxheba nje ngokuthelekisa umvuzo labantu abafumene uqeqesho kwabo andizamkelanga.
Nothelekiso elula luyasebenza ngenxa into eyenzekayo phambi iiinkcukacha bade: le engakhethiyo. Ngaphandle engakhethiyo, ingxaki trickier kakhulu. Umphandi enokuthelekiswa umvuzo abantu ngokuzithandela ezibhalisele uqeqesho kwabo bangazange uphawu-up. Loo uthelekiso mhlawumbi bekuya kubonisa ukuba abantu abafumene uqeqesho ifumene ngaphezulu, kodwa kangakanani oku ngenxa yoqeqesho kunye kangakanani oku kuba abantu ukuba asayine-up yoqeqesho zahlukile kwezo musa uphawu-up kuqeqesho? Ngamanye amazwi, ingaba intle ukuthelekisa umvuzo kula maqela mabini abantu?
Le nkxalabo malunga uthelekiso fair senze abanye abaphandi ukukholelwa ukuba akunakwenzeka ukwenza uqikelelo nakuyo ngaphandle ibaleka ulingelo. Eli bango uya kude kakhulu. Ngexesha kuyinyaniso ukuba imifuniselo zinika ubungqina ngamandla ukuba iziphumo woko, kukho ezinye iindlela ezinokuthi ukubonelela uqikelelo ezixabisekileyo woko. Kunokuba sicinge ukuba uqikelelo nakuyo abangaqeqeshwanga lula (kwimeko eksperimenti) okanye akunakwenzeka (kwimeko nje waphawula data), kungcono ukuba ucinge izicwangciso zokwenza uqikelelo nakuyo elele ecaleni continuum ukusuka iingwanyalala ukuba songqamano (Figure 2.4). Ekupheleni yomeleleyo okuqhubeka ziye olungenamkhethe imifuniselo elawulwayo. Kodwa ke, la maxhoba idla ngokuba nzima ukwenza uphando ekuhlaleni kuba unyango ezininzi zifuna iimali okungenakwenzeka yokusebenzisana koorhulumente okanye iinkampani; kakhulu ngokulula kukho ezininzi experimenti ukuba asikwazi ukwenza. Ndiya kunikela yonke Isahluko 4 zombini amandla kunye nobuthathaka imifuniselo elawulwayo lunomkhethe, yaye ndiza kuxoxa ukuba kwezinye iimeko, kukho izizathu zokuziphatha ngamandla ukuba ukhetha lokuqwalasela iindlela zovavanyo.
Isazobe 2.4: eqhubeka izicwangciso zophando iziphumo woko kuqikelelwa.
Zihamba okuqhubeka, kukho iimeko apho abaphandi ngokuthe lunomkhethe. Oko, abaphandi bazama ukufunda lingelo ezifana nolwazi ngaphandle benza ulingelo; ngemvelo, oku kuza kuba ibhida kakhulu, kodwa idata enkulu iphucula kakhulu isakhono sethu ukwenza uqikelelo nakuyo kwezi meko.
Ngamanye amaxesha kukho izicwangciso apho Randomness ehlabathini ntoni ukwenza into efana ulingelo kubaphandi. Ezi uyilo ngokuba imifuniselo zendalo, kwaye ke ziya kuqwalaselwa ngokweenkcukacha kwiCandelo 2.4.3.1. iinkalo ezimbini imithombo-yabo data enkulu usoloko-on ubume babo ubungakanani-kunene siphucule amandla ethu ukuba bafunde imifuniselo yendalo xa zenzeke.
Ukufudukela kude imifuniselo elawulwayo lunomkhethe, ngamanye amaxesha akukho nokude isiganeko kwindalo sikwazi ukusebenzisa beko kwelinge yendalo. Kule meko, siza angakha ngenyameko uthelekiso phakathi data non-zovavanyo ngelizama beko umfuniselo. Ezi uyilo kuthiwa ethelekisa, kwaye ke ziya kuqwalaselwa ngokweenkcukacha kwiCandelo 2.4.3.2. Kanye imifuniselo zendalo, ukutshatisa eso sakhiwo bayangenelwa kwimithombo data enkulu. Ingakumbi, ubungakanani-omabini enkulu ngokubhekiselele kwinani lezehlo nohlobo lwengcaciso kwimeko-kakhulu lula ethelekisa. Umahluko ezingundoqo phakathi imifuniselo endalo ethelekisa kukuba imifuniselo yendalo umphandi uyazi inkqubo apho unyango wabelwa kwaye ukholelwa ukuba random.
Ingcamango uthelekiso fair eyakhuthaza iminqweno ukwenza imifuniselo kwakhona sokungenelela ezinkqubo zimbini ezizezinye: imifuniselo zendalo ezingqameneyo. Le nkqubo iya kukunceda ukuba baqikelele iziphumo nakuyo evela data behleli bokugcinwa Usihlube uthelekiso fair uhleli ngaphakathi data ukuba sele unayo.